Liis diiwaan oo Daacish laga hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Vad visste Säpo om IS-listan?
Liis diiwaan oo Daacish laga hayo
La daabacay fredag 11 mars 2016 kl 12.19
Telefishinka Sky News ee laga leeyahay dalka Ingriiska ayaa gacanta ku dhigay liis diiwaan oo laga soo xaday Daacish ayna ku qoran yahiin magacyada iyo xogta 22 000 oo qof oo Daacish ka tirsan.
Liiska waxaa ku xusan magacyada, telefoonada iyo ciiwaanada dad ku biiray Daacish oo ka kalo tagay 51 dal. Liiskan ayaa sidoo kale u gacan galay hey’adda amniga Ingriiska iyo Jarmalka
– Waa sida in la helay gud dahab ka buuxo, ayuu yeri sarkeel sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Ingriiska M16.
Liiskan diiwaan ayaa la sameeyey sannadkii 2013ka, waxaan liiskan soo xaday oo u gacan geliyey telefishinka Sky News qof horey uga tirsanaan jiray ururka Daacish una qaabilsanaa amniga gudaha ee kooxda.
Telefishinka Sky News ayaa tabiyey Liiskan diiwaan ay ku jiraan magacayada shaqadsiyaad ka tirsan Daacish oo aan horey loo magal kuwaas oo ka kalo yimid waddamada waqooyiga Yurub , USA iyo Kanada. Telefishinka waxuu sheegey qaar badan oo mid ah argagaxisadaan marka dagaalo jihaada Suuriyo uga soo qayb galaan ay haddana dib ugu noqdaan wadamadii ay ka yimaadee.
Wasiirka arrimaha guddaha "Liis aad muhim ah"
Ander Ygeman wasiirka arrimaha guddaha ayaa ku tilmaamey liiskan diiwaan ee laga hayo Daacish mid aad muhiim u ah.
– Dabcan aad buu muhim ugu yahay liiska noocaan hey’adaha amniga si loo ogaado dadka si firfircoon uga qayb qaatan ururada argagaxisada, ayuu yeri Ygeman wasiirka arrimaha gudaha Sweden.
Liiskan diiwaan ee Daacish laga hayo ka sakow in ay ku qoran yahiin magacyada, ciiwaanada iyo macluumaadka dadkan ku biirey Daacish, sidoo kale waxaa ku xusan shaqada ay ururka u qabtaan, tusaale haddii uu yahay askeri dagaalada loogu talo galay ama yahay ruux isqarxinta loogu talo galay ama arrimaha sirdoonka.
Hey’adda Sirdoonka Sweden Säpo ayaa guud ahaan ka gaabsatay in ay ka hadasho waxay kalo socoto liiska diwaan ee laga hayo Daacish iyo haddii ay ku jiraan dad ka soo jeeda Sweden.